Wararka Maanta: Isniin, Mar 17, 2008-Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Gobolka Sh/hoose oo beeniyay hadal uu sii daayay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir
Maxamed Dheere ayaa hadal saxaafadeedka uu bixiyay wuxuu ku sheegay in weerar dhawaan lagu qaaday Siinka Dheer iyo Deegaannada Ceel Carfiid iyo Caliyaale laga soo abaabulay Deegaanka Ceelasha Biyaha ee Gobolka Shabeelaha Hoose, isagoo sheegay in uu Deegaankaas gabaad u yahay kooxaha la dagaalama dowladda Federaalka Soomaaliya.
Nuuriye Cali Faarax waxaa uu sheegay in hadalka Maxamed Dheere uu ula muuqdo mid uu ujeeddo ka lahaa, isla markaana uu ku doonayo in uu mar kale ku sii barakiciyo dadka ku nool deegaanka Ceelasha Biyaha oo markoodiihore ka soo qaxay Magaalada Muqdisho.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Gobolka Shabeelaha Hoose Nuuriye Cali Faarax waxaa uu sheegay in Maxamed Dheere laga doonayo in uu caddeyn buuxda u keeno hadalka uu sheegay ee ah in deegaanka Ceelasha Biyaha ay ku dhuuntaan Kooxaha la dagaalama Dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Maxamed Dheere haddii uu run sheegayo muxuu u dhihi waayay dagaalkii lagu qaaday Ex Koontarool Balcad iyo Warshaddii Baastada waxaa laga soo abaabulay Galgalato”ayuu yiri Nuuriye Cali Faarax oo sheegay in
Nuuriye Cali Faarax waxaa uu intaas ku daray in Maxamed Dheere uu yahay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, isla markaana uusan ahayn Ra’iisal Wasaare ka hadli kara arrimaha Gobollada Dalka Soomaaliya guud ahaan.
Si kastaba Arrintu ha ahaatee, maamullada Gobolka Banaadir iyo Shabeelaha Hoose ayaa dhowr jeer oo hore waxay iskula dhaceen arrimo ku saabsan xuduudka labada gobol iyo weliba canshuur ka qaadista Gaadiidka labada gobol ee isu tallaaba, iyadoo xitaa maamulka gobolka Shabeelaha Hoose uu gaaray in uu joojiyo in ay gaadiidka wata sumadda Gobolka Banaadir ay u tallaabaan dhinaca Gobolka Shabeelaha Hoose.
3/17/2008 5:43 AM EST